Mustafa Maxamed oo guul soo hooyay | Somaliska
Orod-yahanka Mustafa Maxamed ayaa ku guuleeystay tartanka orodka ee qaranka 5 000, middaasina oo u suurtagelisay inuu tartan qura qaado saddex bilad-dahab oo markii ugu dambeeysay uu sidaa ugu guuleeystay orod yahankii iswiidhishka Dan Glans ee sannadkii 1976-dii.
Mustafa Maxamed: "U maleeyn meeyn inay sidaa u sahlanaan doonto”, sida uu sheegay Mustafa Maxamed, kadib kolkii uu ku guuleeystay biladdii saddexaad ee dahabka ee tartanka oroddada ee Iswiidhen".
”Sidaa uma cuslayn hase yeeshee way qalafsannayd”, sida uu sheegay Mustafa Maxamed mar uu ku guuleeystay saddex maalmood gudahood saddex billadood oo dahab tartankii oroddada ee ka dhacayey magaalada Falun.
Jimcadii ina dhaaftay ayuu Mustafa Maxamed ku guuleeystay tartanka oroddada ee 10 000 ee mitir, halka uu maalintii sabtidii iyo axaddiina ku guuleeystay tartanka oroddada ee 3 000 ee mitir ee qoryaha laga boodo iyo 5 000 ee mitir, middaasina oo taariikhda uu ku galay.
Haddii aad dib u eegto tartankaa maxaad ka oran lahayd?
– Waxaa iigu muhiimsan inaan saddex tartan ku guuleeystay. Xaqiiqdii waan hubay inaan ku guuleeysan karo saddexda tartan, hase yeeshee ineay sidaa u sahlan tahay ma moodeeyn. Mise sidaa uma sahlaneeyn waase mid farxad leh, ayuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay Mustafa Maxamed, orod-yahanka iswiidhishka-soomaaliga mar uu ka warramayay tartammadaa.
Orod-yahanka Mustafa Maxamed ayaa ku guuleeystay tartanka orodka ee qaranka 5 000, middaasina oo u suurtagelisay inuu tartan qura qaado saddex bilad-dahab oo markii ugu dambeeysay uu sidaa ugu guuleeystay orod yahankii iswiidhishka Dan Glans ee sannadkii 1976-dii.Mustafa Maxamed: "U maleeyn meeyn inay sidaa u sahlanaan doonto”, sida uu sheegay Mustafa Maxamed, kadib kolkii uu ku guuleeystay biladdii saddexaad ee dahabka ee tartanka oroddada ee Iswiidhen". ”Sidaa uma cuslayn hase yeeshee way qalafsannayd”, sida uu sheegay Mustafa Maxamed mar uu ku guuleeystay saddex maalmood gudahood saddex billadood oo dahab tartankii oroddada ee ka dhacayey magaalada Falun.Jimcadii ina dhaaftay ayuu Mustafa Maxamed ku guuleeystay tartanka oroddada ee 10 000 ee mitir, halka uu maalintii sabtidii iyo axaddiina ku guuleeystay tartanka oroddada ee 3 000 ee mitir ee qoryaha laga boodo iyo 5 000 ee mitir, middaasina oo taariikhda uu ku galay. Haddii aad dib u eegto tartankaa maxaad ka oran lahayd?– Waxaa iigu muhiimsan inaan saddex tartan ku guuleeystay. Xaqiiqdii waan hubay inaan ku guuleeysan karo saddexda tartan, hase yeeshee ineay sidaa u sahlan tahay ma moodeeyn. Mise sidaa uma sahlaneeyn waase mid farxad leh, ayuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay Mustafa Maxamed, orod-yahanka iswiidhishka-soomaaliga mar uu ka warramayay tartammadaa. Xigasho: Sveriges Radio.
Mustafa Maxamed: “U maleeyn meeyn inay sidaa u sahlanaan doonto”, sida uu sheegay Mustafa Maxamed, kadib kolkii uu ku guuleeystay biladdii saddexaad ee dahabka ee tartanka oroddada ee Iswiidhen”.
Orod-yahanka Mustafa Maxamed ayaa ku guuleeystay tartanka orodka ee qaranka 5 000, middaasina oo u suurtagelisay inuu tartan qura qaado saddex bilad-dahab oo markii ugu dambeeysay uu sidaa ugu guuleeystay orod yahankii iswiidhishka Dan Glans ee sannadkii 1976-dii.Mustafa Maxamed: “U maleeyn meeyn inay sidaa u sahlanaan doonto”, sida uu sheegay Mustafa Maxamed, kadib kolkii uu ku guuleeystay biladdii saddexaad ee dahabka ee tartanka oroddada ee Iswiidhen”. ”Sidaa uma cuslayn hase yeeshee way qalafsannayd”, sida uu sheegay Mustafa Maxamed mar uu ku guuleeystay saddex maalmood gudahood saddex billadood oo dahab tartankii oroddada ee ka dhacayey magaalada Falun.Jimcadii ina dhaaftay ayuu Mustafa Maxamed ku guuleeystay tartanka oroddada ee 10 000 ee mitir, halka uu maalintii sabtidii iyo axaddiina ku guuleeystay tartanka oroddada ee 3 000 ee mitir ee qoryaha laga boodo iyo 5 000 ee mitir, middaasina oo taariikhda uu ku galay.
Haddii aad dib u eegto tartankaa maxaad ka oran lahayd?– Waxaa iigu muhiimsan inaan saddex tartan ku guuleeystay. Xaqiiqdii waan hubay inaan ku guuleeysan karo saddexda tartan, hase yeeshee ineay sidaa u sahlan tahay ma moodeeyn.
Mise sidaa uma sahlaneeyn waase mid farxad leh, ayuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay Mustafa Maxamed, orod-yahanka iswiidhishka-soomaaliga mar uu ka warramayay tartammadaa.
Haweeney shiinees ah oo lagu xadgudbay oo dalka laga saarayo.